Iimfuno zokuba yiSenator yase-US zisekwe kwiSiqendu I, Icandelo 3 loMgaqo-siseko wase-US. I-Senate yindawo ephezulu yase-United States yokumisela umthetho (iNdlu yabameli ibingaphantsi), equle amalungu angama-100. Ukuba unamaphupha okuba ngumnye wabasenantshini ababini abamele ilizwe ngalinye iminyaka emithandathu, unokufuna ukujonga umGaqo-siseko kuqala. Uxwebhu olumkhokelo lo rhu lumente wethu luchaza ngokucacileyo iimfuneko ukuba zibe yintetho.
Abantu kufuneka babe:
Ubuncinane ubuneminyaka engama-30 ubudala
Ummi wase-US ubuncinane iminyaka engama-9 ngexesha lokunyulwa kwi-Senate
Umhlali waseburhulumenteni ukhethwa ukuba amele kwi-Senate
Kuyafana naleyo yokuba ngummeli wase - United States , iimfuneko zomGaqo-siseko ukuba ube nguSenator ugxininise kwiminyaka yobudala, ubuzwe boMzantsi Afrika kunye nokuhlala.
Ukongezelela, i-post-Civil War Ilungiso leshumi elinesibini kuMgaqo -siseko wase-United States uvimbela nayiphi na umntu ethathe isifungo sombuso okanye isifungo esifungileyo sokuxhasa uMgaqo-siseko, kodwa kamva waba nxaxheba kwimvukelo okanye mhlawumbi uncedise nayiphi na intshaba yase-US ekukhonzeni kwiNdlu okanye kwiSenethi.
Le yodwa imfuno yeofisi echazwe kwiCandelo le-1, iCandelo 3 loMgaqo-siseko, othi, "Akukho mntu uya kuba yiNkulumnene engayi kufikelela kwi-Age yobudala beminyaka engamashumi amathathu, kwaye ube yiminyaka elisithoba kwisiGidi eUnited States, kwaye ngubani ongekhe, xa ekhethiweyo, abe ngumhlali welo Rhulumente apho uya kukhethwa khona. "
Ngokungafani nabameli base-US, abamele abantu bezithili ezithile kwiindawo zabo, amaSenethi ase-US abamele bonke abantu kwilizwe labo.
I-Senate neeMfuno zeNdlu
Kutheni le miqathango yokukhonza kwi-Senate ingqongqo ngakumbi kunezo zokusebenzela iNdlu yabameli?
KwiNgqungquthela yoMgaqo-siseko ka-1787, iindwendwe zikhangelele kumthetho waseBrithani ekumiseni ubudala, ubemi, kunye nokuhlala okanye izikhundla zokuhlala "kubahlali" kunye nabameli, kodwa bavota ukuba bangamkeli unqulo olucetywayo kunye neemfuno zobunini bepropati.
Iindwendwe zixubusha ubuncinci beminyaka yabaphathi bee senator emva kokuba bebekele iminyaka yobumeli kwi-25. Ngaphandle kwengxoxo, abavoti bavota ukubeka iminyaka engaphantsi kwama-senators kwi-30. kwimeko echaphazelayo "inkolelo yokwahlulela," "ubungakanani obuninzi bolwazi kunye nokuzinza komlingiswa," kwakudingeka ukuba abaphathi bee senentha kunabameli.
Ngokuthakazelisayo, umthetho wesiNgesi ngexesha libeka ubuncinci bexesha lamalungu eNdlu yeeNdlu, kwi-low chamber yePalamente, ngo-21, nangama-25 ngamalungu endlu ephezulu, iNdlu yeeNkosana.
Umthetho wesiNgesi ngo-1787 wathintela nawuphi na umntu ongazalwanga "kwizikumkani zaseNgilani, eScotland, okanye eIreland" ekusebenzeni kwiqela lePalamente. Ngelixa ezinye iindwendwe ziye zazingenelwa ukuvalwa kwengubo ye-Congress ye-US, akukho namnye kubo owayeyicebisa.
Isiphakamiso sangaphambili sikaGouverneur Morris wasePennsylvania siquka ukufunwa kwabahlali be-US iminyaka eyi-14.
Nangona kunjalo, igosa livotele ngokumelene nesiphakamiso sikaMorris, ukuvota esikhundleni salo nyaka-9 ubudala, iminyaka emibini ngaphezulu kuneminyaka engama-7 ubuncinane abaye bamkela kwiNdlu yabameli.
Amanqaku avela kwindibano abonisa ukuba iindwendwe ziqwalasela imfuneko yeminyaka eyi-9 ukuba idibanise "phakathi kokungabikho kwabemi abamkelweyo" kunye "nokungenwa kwabo ngokungenanto."
Ukuqaphela ukuba abaninzi abemi baseMerika bahlala behlala kwamanye amazwe ixesha elide, abathunywa beva ubuncinane bendawo yokuhlala yase-US, okanye imfuneko yokuba "indawo yokuhlala" imele ifumaneke kumalungu eCongress. Ngelixa iNgilani 'iPalamente iphelile imithetho ehlala kuyo ngo-1774, akukho namnye abathunywa bathetha ngemithetho enjalo yeCongress.
Ngenxa yoko, iindwendwe zavota ukuba zidinga ukuba amalungu eNkosi kunye neSenate abe ngabemi belizwe abaye batyunjwa kodwa bangafaki umda wexesha elincinci kwimfuneko.
I-Phaedra Trethan ngumlobi ozimele kunye nomhleli wangaphambili wekopi yephephandaba le-Philadelphia Inquirer.
Ukuhlaziywa nguRobert Longley
Uphi, nini, kwaye Kutheni i-Congress ye-US idibana?
Yintoni iSigqeba seBicameral kwaye Kutheni i-US inayo enye?
Uninzi lwabantu baseCongress Congress
Imivuzo kunye neenzuzo zamalungu e-US Congress: Inyaniso
Imithetho Elawula iiLobbyists zikaRhulumente
Iimfuno zeClassiers Essentials kuTitshala oThethekileyo olutsha
I-Dagenham Women's Strike of 1968
I-Top 10 eViweyo kwiFilimu yeMfazwe yeeNkqantosi
IYunivesithi yaseDubuque Admissions
UkuPhukisa ukuPhepha nokuPhathwa kweMidiya
Indlela i-MLB Playoffs isebenza ngayo
Uhlolo lweMveliso: I-SCT X3 Power Programmer Programmer
Iifayile ezi-10 eziphambili ze-Jet Li
Yintoni i-PGA Tour Cut Cut Rule?
I-10 eyona nto ibhetele (kunye neyona nto ibhetele) 'I-nightmare e-Elm Street' Ukufa
Ukuqonda indlela kunye nexesha lokuyifaka kwi-Poker
Imizekelo ye-Organic Chemistry kwi-Life Daily
I-Synopsis kaDon Giovanni
I-Advent Wreath Prayer for Iveki yesithathu ye-Advent
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uGeorge H. Thomas
Mercury kwi Astrology